Shiinaha L-Leucine CAS 61-90-5 oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha 'Pharma Grade' (USP) | Salaad
Magaca Badeecada: L-Leucine
CAS MAYA.: 61-90-5
L-Leucine (Abbreviated Leu) waa mid ka mid ah 18ka amino acids ee caadiga ah, iyo mid ka mid ah sideed amino acids oo muhiim u ah jirka aadanaha. Waxaa loogu yeeraa silsilad isku xiran oo amino acids ah (BCAA) oo leh L-Isoleucine iyo L-Valine oo wada socda maxaa yeelay dhammaantood waxay ku jiraan silsilad dhinaca methyl ah oo ku jirta qaab dhismeedkooda molecular.
Maaddaama ay tahay amino acid muhiim ah, waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro nafaqada waxaana badanaa loo isticmaalaa rootiga iyo waxyaabaha rootiga laga sameeyo. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa diyaarinta xalka amino acid, yareynta gulukoosta dhiigga. Ka sokow, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiirrigeliyo koritaanka dhirta.
Leucine waxaa loo isticmaali karaa kaabis nafaqo, xawaash iyo walax dhadhan. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo ku shubista amino acid iyo isku-darka cirbadeynta amino acid, wakiilka hypoglycemic iyo wakiilka dhiirrigelinta koritaanka dhirta.
Shaqooyinka Leucine waxaa ka mid ah la shaqeynta isoleucine iyo valine si loo hagaajiyo murqaha, loo xakameeyo gulukoosta dhiigga loona siiyo jirka tamar. Waxa kale oo ay hagaajin kartaa wax soo saarka hoormoonka koritaanka, waxay kaa caawineysaa gubista dufanka dareeraha ah; baruurtani waxay ku jirtaa jidhka gudaheeda waxtarna uma yeelan karto oo keliya iyada oo loo marayo cuntada iyo jimicsiga.
Leucine, isoleucine, iyo valine waa silsilad amino acids ah oo isku xidhan, kuwaas oo ku habboon kor u qaadida murqaha ka dib tababarka. Leucine waa silsiladaha amino acids-ka ee ugu waxtarka badan oo si wax ku ool ah uga hortagi kara luminta muruqyada tan iyo markii si deg deg ah loo xallin karo loona beddelo gulukoos. Ku darista gulukooska waxay ka hortagi kartaa dhaawaca unugyada muruqyada, sidaas darteed waxay si gaar ah ugu habboon tahay jir-dhise. Leucine wuxuu kaloo wanaajiyaa bogsashada qalfoofka, maqaarka iyo unugyada muruqyada oo dhaawacan, si markaa dhakhaatiirtu sida caadiga ah ay kugula taliyaan codsashada dheecaanka leucine qalliinka kadib.
Ilaha cuntada ugu fiican ee leucine-ka waxaa ka mid ah bariis bunni ah, digir, hilib, lowska, cuntada soybean, iyo badarka oo dhan. Maaddaama ay tahay nooc ka mid ah amino acid muhiim ah, macnaheedu waa inayan soo saari karin bini-aadamka laftiisa waxaana lagu heli karaa oo keliya cuntada. Dadka ku hawlan firfircoonaanta firfircoonida jirka iyo helitaanka cuntada borotiinka oo hooseeya waa inay tixgeliyaan kaabista leucine. In kasta oo ay dalban karto foomka dheeriga ah ee madax-bannaan, haddana waxaa la door bidaa in lagu daro isleucine iyo valine. Sidaa darteed noocyada isku dhafan ee isku dhafan ayaa aad ugu habboon.
Hore: Glycine CAS 56-40-6 ee Fasalka Pharma (USP / EP / BP)
Xiga: L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ee Fasalka Pharma (USP)
Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Nafaqada xoolaha, Fasalka L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Cuntada L-Threonine, L-Valine 72-18-4,